मुटु शरीरको सबैभन्दा बढी संदेनशिल अंग हो । मुटुलाई जोगाएर राख्नु अति आवश्यक हुन्छ ।
मुटुमा आफै समस्या आउने सम्भावना कम हुन्छ । तपाईकै कारण मुटु जोगिने र जोखिममा पर्ने हुन्छ । खानपान देखी सुत्ने सम्मका केही कुराहरुमा ख्याल गर्ने हो भने मुटुलाई सजिलै सँग जोगाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय मान्छेहरु मुटुको समस्याबाट धेरै नै पिडित भएको पाईन्छ । गरिबी बिद्यमान रहेको हाम्रो जस्तो देशका नागरिकले मुटुको उपचार गर्न समस्या छ । अन्य उपचारको तुलनमा त्यस्को उपचार अलि महङ्गो हुने गर्छ । त्यसैले हामीले रोग लाग्न दिनु नै हुँदैन् । मुटु बचाउने केही कुराहरु हामीले तल उल्लेख गरेका छौँ ।
१. कम्तिमा सात घन्टा सुत्ने
हरेक रात कम्तिमा सात घन्टा सुत्ने गर्नुहोस् । कडा परिश्रम छ भने आठ घन्टा सुत्न सकिन्छ । निद्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना बढ्छ । निद्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा रहन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ ।
२. आफ्नो रक्तचाप जानी राख्ने
३. चुरोट खानेको नजिक नबस्ने
४. दैनिक ३० मिनेट हिड्ने
व्यायामले मानिसको आयु बढाउन मद्दत गर्छ । साथै, व्यायामले मुटुको धड्कन हरेक दिन राम्रोसँग चलाउन पनि सहयोग पु¥याउँछ । बुढोपना शरीरमा नदेखिनु त यसको प्रत्यक्ष फाइदा भइहाल्यो । त्यसैले दिनको कम्तिमा ३० मिनेट हिँडेर भए पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
५. हप्ताका एक दिन माछा खाने
६. सन्तुष्ट हुन सिक्ने
७. दाँत माझ्ने
तपाइ सधै ढुधको चिया पिउनुहुन्छ ? स्वास्थ के कस्तो असर गर्छ गर्दैन ? जान्नुहोस